कर्तव्य (दुई लघु कथा) – Chitwan Post
कर्तव्य (दुई लघु कथा)
बिचरा बिर्खे दाइ…! ‘गरिब हुनु पनि एउटा अभिशाप नै रै’छ’– बिर्खेप्रति सहानुभूति देखाउँदै हरिकृष्णले भन्यो । तर, उनका वाक्यहरु टुंग्याउन नपाउँदै ‘होइन होइन, बिर्खेले उ जुनीमा केही पाप गरेको हुनुपर्छ त्यसैको फल भोग्दैछ अहिले’– बट्टारेले बीचैमा प्वाक्क आफ्नो तीतो ओकल्यो । बीसको उन्नाइस पो भयो कि ? बरू एकचोटि हामी सबै जाऊँ न बिर्खेकोमा, आखिर गाह्रो–साह्रो पर्दा त हो नि छिमेकी चाहिने । काजीबाको समर्थन गर्दै चौतारी नैं खाली पारी सबैजना त्यतैतिर लागे ।
राममायाको खसम (बिर्खे) अज्ञात रोगका कारण थलिएको पनि धेरै महिना भैसकेको थियो । उनलाई उपचार गराउन राममायासँग पैसा थिएन । बिरामी भेट्न आउने, सहानुभूति देखाउनेको त समाजमा के कमी हुन्थ्यो र ! पैसाको कुरा ग¥यो कि सबैजना तर्किन्थे ।
त्यति नै बेला राममायाकी नन्द उमा पनि टुप्लुक्क देखा परिन् । राममायाको मनमा थोरै भए पनि आशाको त्यान्द्रो झुन्डिएको थियो उमाप्रति । किनकि भान्जाको मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा उनले सक्दो सहयोग गरेकी थिइन् ।
‘नानी अलिकति पैसा भए मलाई सहयोग गर्दिनोस् न है’– राममाया बोलिन्
‘मेरो दाइ हो, मलाई पनि माया लाग्छ भाउजू । तर के गर्नु, छोराको उपचार गराउँदागराउँदै म आफैँ चुर्लुम्म ऋणमा डुबेकी छु’ भन्दै उनी पन्छिन् ।
अब कसो गर्ने…! टाउकोमा हात राख्दै चिन्तित भइन् राममाया । त्यति नै बेला बुद्धिप्रसाद खनाल बूढा पनि लौराको सहाराले बिर्खेलाई भेट्न आइपुगे र कस्तो छ अहिले बिर्खेलाई भन्दै सोधपुछ गरे ।
अनि भने– ‘चिन्ता नगर नानी, पोहोर साल मेरी बूढी बिरामी हुँदा डोकोमा बोकेर अस्पताल पु¥यायो । अहिले पो मोटरबाटो आयो ।
उसलाई २०–२५ दिन अस्पताल राखेँ । त्यतिबेला यो बिर्खे नभइदिएको भए म एक्लो मान्छे कता के गर्थें हुँला र ! आपतमा पर्दा ठूलो सहयोग गरेको छ मलाई । अब बुढेसकाल लाग्यो । घरमा गर्ने कोही छैनन् । अस्ति ती तीनवटा बाख्रा अनि एउटा भैँसी बेचिदिएँ ।’
खल्तीबाट पचास हजार निकाल्दै उनले ‘लाऊ, यो पैसा राख, पछि बिर्खेलाई निको भएपछि तिरिहाल्छ नि’ भन्दै राममायाको हातमा पचास हजार राखिदिए । तर, पचास हजारले मात्रै कहाँ पुग्थ्यो र…! कम्तीमा एक लाखजति चाहिएको थियो ।
बिहेमा लोग्नेले दिएको गहना छोरा पढाउँदै सकियो । उनका बाबाले बिहे हुनुभन्दा अगाडि उनका स्वर्गवासी आमाको सिक्री उनलाई दिएका थिए । त्यो आमाको चिनो पनि नन्दलाई लिएर बेच्न गइन्, सुन पसलतिर राममाया । रसायन अनि ज्याला कटाएर एक तोला सिक्रीको पैँतालीस हजारमात्रै दियो, सुन पसलेले ।
हत्तपत्त भाउजूको हात समाउँदै नन्दले भनिन्– ‘पर्खनोस् भाउजू, आफूले किन्दा एक तोला सुनको अन्ठाउन्न हजार अनि ज्याला चार हजार गर्दा बैसठ्ठी हजार पर्छ । मसँग पचास हजार छ, त्यो सिक्री मलाई दिनोस् । म बरू यो सुन पसलेले दिने पैँतालीस हजार रूपैयाँ, अझ त्यसमा अरु पाँच हजार थपेर दिन्छु । आखिर मेरो पनि त दाइ हो । केही कर्तव्य त मेरो पनि छ नि उहाँप्रति, होइन र…? बिचरी राममाया न हो भन्न सकी…न होइन भन्न नै…!
खै…त्यो मेरो रहर थियो या बाध्यता ! बीचैमा पढाइ छाडी म इन्डिया गएको थिएँ, एक जना गाउँले दाजुको साथ लागेर । सायद् त्यतिबेला म सत्र–अठार वर्षको हुँदो हुँ । तिमीसँगको बिल्कुलै पहिलो भेट थियोे मेरो त्यो । आहा…! पसलमा साह्रै राम्ररी सजिएर बसेकी थियौ तिमी । साथीहरुको हिम्मत अनि साहसले १ दिन, २ दिन गर्दागर्दै म तिम्रो ज्यादै नजिक हुँदै गएँ ।
तिम्रो सम्बन्धमा रहने हामी सबैको शरीर, सम्पत्ति, घरबार सबैसबै बिगारिदियौ तिमीले । तिमीसँगका सम्बन्धले आफ्ना आफ्ना रहेनन् । सबैले घृणाको दृष्टिले हेर्न थाले । छरछिमेकी, इष्टमित्र सबै सबैबाट हेलाँ भएँ । तिमीले कयौँलाई रोग सारिदियौ । आज तिमीलाई उठाएर छातीमा टाँस्न खोज्दा पनि भतभती छाती जलेर आउँछ । तिमीसँगको सम्बन्धले बिनादोष मैले विभिन्न लाञ्छनाहरु खेप्नुप¥यो । भो, अब सक्दिनँ तिमीलाई झेल्न ।
आज यही ‘अन्तिम पत्र’मार्फत म तिमीलाई भन्दैछु– हामीले सँगै बिताएका ती नमीठा र तीता पलहरुलाई म पूर्णरुपमा पूर्र्णिवराम दिँदैछु, एउटा नमीठो सपना सम्झेर । मेरो जीवनमा अब कहिल्यै पनि आउने चेष्टा नगर्नू । हृदयमा कोरिएका, कुनै बेला अति मन पराइएका तिम्रा गाउँका काकाबाउ (खोया बिर्के), सहरतिर बस्ने तिम्रा अंकल–आन्टी, ह्विस्की, ब्रान्डी, रमलगायत तिमी अनि तिम्रा सम्पूर्ण खानदानहरुसँग नाता तोड्दैछु । अब बिर्सेर पनि तिमी अनि तिम्रा इष्टमित्र मेरो छेउछाउ पनि नपर्नू । तिमीहरु सबैलाई आजैबाट तिलाञ्जलि । सधैँ–सधैँका लागि बाई–बाई… रक्सी…!